Andriamatoa Kang, - Comics olon-dehibe - andian-dahatsoratra vaovao, hafainganam-pandeha haingana, havaozina haingana - ManyToon - Read Comics Free Comics Free Online
mitohy Andriamatoa Kang
Salanisa 4.2 / 5 amin'ny vato 39 total.
45th, manana fijery isam-bolana 128.6K
Ireo mpampiasa 156 dia nanamarika ity
Miova tanteraka ny fadim-bolany rehefa sendra “mpamonjy” izy! Hahazo sipa ve izy amin'ny farany?
Anisan'ireo tranokala famaky maimaimpoana maimaim-poana. Manytoon.com dia manana mpamaky maro mahatoky. Manytoon.com dia tranokala tsara hamakiana tantara an-tsary maimaimpoana. Misy tantara an'arivony momba ny webtoon, manhwa, tantara an-tsary ary manga lehibe eto. Havaozina isan'andro ny tranokala izay tsy maintsy tiako ny mpamaky rehetra.
Tsidiho ary vakio ny boky tantara an-tsary maimaim-poana an'i Manytoon.com, Vakio maimaimpoana ny Comic an-tserasera eto ary manantena aho fa tsy hanadino an'io mihitsy ianao
Chapter 69 Janoary 22, 2020
Chapter 67 Janoary 12, 2020
Chapter 66 Janoary 6, 2020
Chapter 65 Desambra 29, 2019
Chapter 64 Desambra 29, 2019
Chapter 63 Desambra 20, 2019
Chapter 62 Desambra 20, 2019
Chapter 61 Novambra 29, 2019
Chapter 60 Novambra 23, 2019
Chapter 59 Novambra 23, 2019
Chapter 58 Novambra 12, 2019
Chapter 57 Novambra 6, 2019
Chapter 56 Novambra 1, 2019
Chapter 55 Novambra 1, 2019
Chapter 54 Novambra 1, 2019
Chapter 53 Oktobra 25, 2019
Chapter 52 Oktobra 25, 2019
Chapter 51 Oktobra 25, 2019
Chapter 50 Oktobra 25, 2019
Chapter 49 Septambra 4, 2019
Chapter 48 Septambra 4, 2019
Chapter 47 Septambra 4, 2019
Chapter 46 Septambra 4, 2019
Chapter 45 Septambra 4, 2019
Chapter 44 Septambra 4, 2019
Chapter 43 Aogositra 21, 2019
Chapter 42 Aogositra 21, 2019
Chapter 41 Aogositra 21, 2019
Chapter 40 Aogositra 21, 2019
Chapter 39 Aogositra 21, 2019
Chapter 38 Aogositra 21, 2019
Chapter 37 Aogositra 21, 2019
Chapter 36 Aogositra 21, 2019
Chapter 35 Aogositra 21, 2019
Chapter 34 Aogositra 21, 2019
Chapter 33 Aogositra 21, 2019
Chapter 32 Aogositra 21, 2019
Chapter 31 Aogositra 21, 2019
Chapter 30 Aogositra 21, 2019
Chapter 29 Aogositra 21, 2019
Chapter 28 Aogositra 21, 2019
Chapter 27 Aogositra 21, 2019
Chapter 26 Aogositra 21, 2019
Chapter 25 Jona 21, 2019
Chapter 24 Jona 21, 2019
Chapter 23 Jona 21, 2019
Chapter 22 Jona 21, 2019
Chapter 21 Jona 21, 2019
Chapter 20 Jona 15, 2019
Chapter 19 Jona 15, 2019
Chapter 18 Jona 15, 2019
Chapter 17 Jona 15, 2019
Chapter 16 Jona 15, 2019
Chapter 15 Jona 5, 2019
Chapter 14 Jona 5, 2019
Chapter 13 Jona 5, 2019
Chapter 12 Jona 5, 2019
Chapter 11 Jona 5, 2019
Chapter 10 Enga anie 22, 2019
Chapter 9 Enga anie 22, 2019
Chapter 8 Enga anie 22, 2019
Chapter 7 Enga anie 22, 2019
Chapter 6 Enga anie 22, 2019
Toko 0 - Prologue March 20, 2019
avereno azafady …….
toko 39 sy 40 dia navotsotra koa
Right.? Tena kivy tanteraka i Nain rehefa nandao azy teo amin'ny zaridainam-panjakana. Fa ity karazana fampandrosoana ity dia tena mahaliana
Masina shiiittt mahatahotra ity !!
Dang dia mila miandry ny toko hafa hivoaka…
Ahoana ny fomba halehany hatramin'ny volo mena ka ny volo mainty
Nisy lehilahy iray niseho hisolokiana ny borikiny
mampalahelo ny milaza an'io lehilahy io hoe tsy nieritreritra aho fa nitombo izy fa tsy nampalahelo
Aza asiana teny hafa hamaritana azy
Tohodrano… Tsara ny tohatra rehetra, miandry miandry famotsorana indray aho… Ity dia andiany iray ho an'ny lisitra rec.
Avelao Andriamatoa Kang hitady an'io resaka janga io
io frein freak io?
lohany, milomano manodidina ny efitranony manokana
Lavo koa i Nain !!!
Maninona i Kang dia tsy ho toy ny mpandroba intsony… Mieritreritra aho fa mpilatsaka an-tapitrisany ary nandeha irery izy
Oay lele…. Io iray dia goood !!!
Mitovy ihany ny fahitana azy ireo. Ataoko fa antsasaky ny volana ry zareo
Ny majan'ny makiazy lol
Fa maninona no misy kanosa toy izany i Kang? Na ho malemy. Tsy afaka niaro an'i Nain mihitsy aza izy rehefa voadona.
Oppai dia rariny
Olo… ny mpiray tendro aminy rehetra. Naima nivadika ho mody i Naim, ny yeouna dia zazakely teo am-piandohana. Tsy afaka mahita olona tia azy ve izy? Mahatsapa alahelo ho azy aho lol
[Whisper] ataovy izany… ataovy izany.
Ny tsara indrindra ao Vanila
Ilay WTF manankarena !!! HAhahaha
Novambra 18, 2019
Ny serivisy fampiantranoana zazavavy
tantara an-tsary olon-dehibe, sariitatra olon-dehibe, tantara an-tsary mahatsikaiky, manga manga, kiraro tanora, comix olon-dehibe, DC mahatsikaiky, sariitatra maloto, sary an-tserasera maimaimpoana, tantara an-tsary matanjaka, hentail anime, tantara an-tsary Koreana, manga korean, korean manhwa, korean webtoon romantika, manga korea, manhwa anime, manhwa english, manhwa manga, manhwa romantika, tantara an-tsary milftoon, tantara an-tsary, tantara an-tsary mahatsikaiky, webtoon korea, manga manga, Tantara an-tsary xxx